Madaxda Jubbaland & Puntland oo kulan kula leh Muqdisho Safiirka Mareykanka +(SAWIRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxda Jubbaland & Puntland oo kulan kula leh Muqdisho Safiirka Mareykanka +(SAWIRO)
Madaxda Jubbaland & Puntland oo kulan kula leh Muqdisho Safiirka Mareykanka +(SAWIRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa gudaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka socda shir u dhaxeeya dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Safiirka u qaabilsan Mareykanka Soomaaliya.
Kulankaan oo ah mid ay Albaabadu u xiran yihiin waxaa diiradda lagu saaraya Arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale kulanka lagu waddo in uu dhexmaro Madaxweyne Farmaajo iyo labada maamul goboleed.
Dowladda Mareykanka ayaa garwadeen ka ah Shirka dhexmari doona labada dhinac.
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo Wufuud ay kala hoggaaminayaan ayaa Talaadadii maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee Muqdisho kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho.
Shir albaabada u xira